Zuva reKucherechedza Kuburitswa kweNhau Pasina Kumbunyikidzwa
Amai Wynne Musabayana
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko meAU Commission Amai Wayne Musabayana vati zvakakosha kuti vatori venhau vaburitse nhau dzechokwadi sezvo pave nedambudziko remadande mutande matsva kana kuti social media iyo inomboburitsa nhau dzemanyepo.
Vati seAfrican Union vanokoshesa zvikuru nyaya yesarudzo dzakachena asi nekuda kwenhau dzenhema pamadandemutande akaita seFacebook neTwitter zvinogona kunetsa kuti muve nesarudzo dzakachena dzinokurudzira hutongi hwejekerere.
Misangano yeWorld Press Freedom Day yakatanga kuitwa kuEthiopia musi wa 1 ikapera nemusi weChishanu unova musi wakatarwa neUnited Nations muna 1993 kuti ucherechedzwe mabasa anoitwa nevatori venhau.
Izvi zvakatevera chibvumirano chainge chaitwa nevatori venhau muAfrica chinonzi Windhoek Declaration muna 1991 chaikurudzira kuti vatori venhau vaite basa vakasungunuka.
Mutevedzeri wasachigaro weAU Commission VaQuartey Thomas Kwesi vanoti pahurongwa hwegore rino African Union yange ichishanda nesangano reUnited Nations reUNESCO mukuita mhemberero idzi.
Hurumende yeEthiopia yainge ichibatsirawo nerutsigiro kubva kuEconomic Commission for Africa.
Vatori venhau kubva kunyika dzakawanda kusanganisa Zimbabwe vakaenda kugungano iri.
Hurukuro naAmai Wayne Musabayana
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko Amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende inoremekedza zvikuru vatori venhau uye iri mubishi kuvandudza mitemo inonzi inodzvinyirira vatori venhau yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act kana kuti AIPPA.
Amai Mutsvangwa vakataura mashoko aya kuStudio 7 kumucheto wemhemberero dzekucherechedza zuva revatori venhau kana kuti Press Freedom Day kuGreat Zimbabwe University kuMasvingo.
Vanoti hurumende yemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa inokoshesa zvikuru basa rinoitwa nevatori venhau munyaya yehutongi hwejekerere.
Vati vatori venhau vanenge vashungurudzwa vakasungunuka kuti vaende kuno mhan’ara nyaya dzavo kumapurisa. Izvi zvinotevera kugunun'una kwevatori venhau kuti vanombombunyikidzwa pavanenge vachiita basa ravo.
Amai Amanda Bennet in Kosovo
Mukuru weVoice of America Amai Amanda Bennet vaburitsawo mashoko nhasi vachitaura nezvekukosha kwezuva revatori venhau kana kuti Press Freedom Day vachiti nhepfenyuro yeVOA yakazvipira kuramba ichiburitsa nhau dzechokwadi dzisina divi radzinonorerekera.
Amai Bennet vati, “Muno muAmerica tinoti haasi masanga kuti kusununguka kwevatori venhau ndicho chinhu chakatanga kuitwa kuvandudza bumbiro remutemo nekuti kana nyika isina vatori venhau vanoshanda vakasungunuka vanhu havawane mashoko akakosha muhupenyu hwavo.”
Vanoenderera mberi vachiti, “Ndosaka muchiona hurumende dzehudzvanyiriri dzichikurumidza kumbunyikidza vatori venhau kana munyika mukaita kusagadzikana. Nekuti dzinoziva kuti nhau dzechokwadi dzinopa vanhu simba uye vanhu vakawanawo simba vanokwanisa kuva pachikero chimwe nevatungamiri venyika."
Mashoko Amai Amanda Bennet
VOA ndiyo nhepfenyuro huru inotepfenyuro mumitauro inosvika makumi mana nemashanu kuvanhu vanemukana mudiki wekunzwa nhau kana kuti vanombunyikidzwa.
Nhepfenyuro yeVOA yakaparurwa muna 1942 uye yakanangana nekuburitsa nhau dzechokwadi dzisina divi radzinorerekera. Hurumende yeAmerica kuburikidza nemitero inobhadharwa nevanhu vayo ndiyo inopa VOA mari kuburikidza nebazi re U.S. Agency for Global Media.
Chinangwa cheVOA ndechekuti iburitse nhau yakazvimirira. Izvi zvinoitwa kuburikidza nemitemo inodzivirira vatori venhau kubva kune vezvematongerwo enyika nevamwe vanoda kuvhiringidza mashandiro avo.
Muna 1976, vaive mutungamiri wenyika yeAmerica VaGerald Ford vakaisa ruoko rwavo pa gwaro regwara kana kuti VOA Charter vachiti nhepfenyuro yeVOA inotarisirwa kuburitsa nhau dzisina divi radzinorerekera nguva dzose uye dziri dzechokwadi dziine hudzamu.